ShweMinThar: ‘အညော်’ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ?
ကျနော်တို့ငယ်ငယ်ကထဲက ခဏခဏ ကြားဖူးခဲ့တဲ့ ‘အနာရှိရင် အညော်မမိစေနဲ့နော်…’ ဆိုတဲ့စကားထဲက အညော်ဟာ ကျနော်တို့အတွက်တော့ ဒဏ္ဏာရီလိုလို ပုံပြင်လိုလို ဖြစ်နေတာကြာခဲ့ပါပြီ… ကျနော်တို့သင်ခဲ့ရတဲ့ အနာကျက်နှေးစေတဲ့အကြောင်းတွေ (Factors Influencing Wound Healing) ထဲမှာတော့ အညော် (Fumes) ဟာ အချက်အလက်တစ်ခုအနေနဲ့ မပါဝင်ခဲ့ပါဘူး… ဒါပေမယ့် အနာကျက်နှေးစေတဲ့ အကြောင်းတွေထဲမှာပါတဲ့ အောက်စီဂျင်လုံလုံလောက်လောက်ရရှိခြင်း (Oxygenation) နဲ့တော့ သွယ်ဝိုက်ပြီး သက်ဆိုင်ရင် သက်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်…
ကျနော်တို့သိခဲ့တဲ့ အနာကျက်နှေးစေတဲ့အကြောင်းတွေကို ဒဏ်ရာတဝိုက်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်း (Local Factors) နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ ကျန်တဲ့စနစ်တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်း (Systemic Factors) တွေဆိုပြီး ခွဲခြားပြောကြပါတယ်… အခုဆောင်းပါးမှာတော့ အဲ့ဒီလို မခွဲခြားဘဲ ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်… အခုဖော်ပြတဲ့အချက်တွေကို အသေးစိတ်သိချင်ရင် နောက်ဆက်တွဲမှာ ထပ်ပြီး ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်… ကျနော်တို့သိခဲ့တဲ့ အနာကျက်နှေးစေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့-
၁။ အောက်စီဂျင်လုံလုံလောက်လောက်မရတာ၊ (Oxygenation)
၂။ ချုပ်ကြိုးတင်းလွန်းတာ၊(Wound Tension)
၃။ ဒဏ်ရာရတဲ့နေရာ၊ (Site of Wound)
၄။ ထုံဆေးထိုးပြီးချုပ်တာ၊ (Local Anaesthesia)
၅။ အအေးဓာတ်လွန်ကဲတာ၊ (Temperature)
၆။ အနာကို ရောဂါပိုးဝင်တာ၊ (Infection)
၇။ အနာထဲမှာ ကိုယ့်သွေးသားမဟုတ်တဲ့ ပြင်ပက ပစ္စည်းတစ်ခုခုရှိတာ၊ (Foreign Body)
၈။ ပျက်စီးပုပ်ဆွေးနေတဲ့တစ်သျှူးနဲ့ အသားစတွေရှိနေတာ၊ (Death tissue)
၁၀။ ဆီးချိုသွေးချိုလို အနာကျက်နှေးစေတဲ့ရောဂါတွေရှိတာ၊ (Diseases)
၁၁။ အာဟာရချို့တဲ့တာ၊အနာကျက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ချို့တဲ့တာ၊ (Nutrition)
၁၂။ စတီးရွိုက်၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးလိုဆေးမျိုးကို သောက်သုံးနေတာ၊ (Medications)
၁၃။ အရက်၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ (Alcohol and Smoking)
၁၄။ စိတ်ဖိစီးမှုများတာ၊ (Stress)
၁၅။ အသက်အရွယ်ကြီးတာ (၆၀နှစ်အထက်) (Old Age)
၁၆။ လိင်ဟော်မုန်းဓာတ်ပုံမှန်မဟုတ်တာ၊ (Sex Hormone)
၁၇။ အဝလွန်တာ၊ (Obesity) တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်…
အညော်လို့ ပြောမယ်ဆိုရင် အညော်ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို အရင်ရှင်းရမယ် ထင်ပါတယ်… အညော်ဆိုတာကတော့ အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပါပဲ… ရှူမိရင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့၊ အနံ့ပြင်းတဲ့ အခိုးအငွေ့ (ဓာတ်ငွေ့)တွေပါပဲ…
စားဆီ၊ ငရုတ်သီး၊ ဟင်းချက်စရာ တစ်ခုခုကို ကြော်လှော်ရာကနေ ထွက်လာတဲ့အခိုးအငွေ့၊ အနံ့၊ ကတ္တရာကို အရည်ကြိုရင်ထွက်လာတဲ့ အခိုးအငွေ့၊ ခြင်ဆေးလို လောင်ကျွမ်းရာကထွက်လာတဲ့အခိုးအငွေ့၊ ကားအိတ်ဇော က ထွက်လာတဲ့ ဓာတ်ငွေ့၊ ကျောက်မီးသွေးဓာတ်ငွေ့၊ ယမ်းငွေ့ စသည်ဖြင့် အညော်အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်… အဲ့ဒီအညော်တွေထဲမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေ အများကြီးပါပါတယ်… ဥပမာအားဖြင့် ကားအိတ်ဇောကထွက်တဲ့ မီးခိုးငွေ့ထဲမှာ Carbon monoxide, Sulfur dioxide, nitrogen oxides, formaldehyde, Hydrocarbon (Benzene) နဲ့ တခြားဓာတ်ငွေ့တွေပါဝင်ပြီး အများကြီးရှူမိမယ်ဆိုရင် ရှူသွင်းမိတဲ့လူကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်… အချိန်အကြာကြီး အမြဲလိုလိုရှူနေမိမယ်ဆိုရင် သွေးကင်ဆာရောဂါ အပါအဝင် တခြားကင်ဆာရောဂါတွေပါ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်… အစားအသောက်တွေကို ဆီနဲ့ကြော်လို့ထွက်လာတဲ့အညော်ငွေ့မှာလည်း PAHs လို့ အတိုကောက်ခေါ်တဲ့ Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (Benzene) တွေ၊ Acrolein နဲ့ Acetaldehyde စတဲ့ ဓာတ်ငွေ့တွေထွက်လာပြီး အဆုတ်ကိုထိခိုက်တဲ့အတွက် အညော်နဲ့ထိတွေ့မိတဲ့ စားဖိုမှူးအများစုဟာ အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မားပါတယ်… လေ့လာမှုတစ်ခုအရ စားသုံးဆီတွေကိုကြော်ရာကနေ ထွက်လာတဲ့ PAHs ဓာတ်ငွေ့ ၁၆ မျိုးက ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေတဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်…
အညော်တွေအားလုံးလိုလိုမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ငွေ့က PAHs တွေပါပဲ… PAHs ဒြပ်ပေါင်းတွေဖြစ်တဲ့ Benzene ဆိုတာက ကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့နဲ့ ဟိုက်ဒြိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့ကို ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးပါ… PAHs ဓာတ်ငွေ့မှာ ဒြပ်ပေါင်း အမျိုးအစား ၁၅၀ ကျော်ရှိပါတယ်… ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အထိ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတဲ့ PAHs ဓာတ်ငွေ့က ၁၄ မျိုး ရှိပါတယ်… PAHs အညော်တွေဟာ ကျနော်တို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို အသက်ရှူသွင်းတာရယ်၊ ကြော်လှော်ထားတဲ့အစားအစာတွေကို ဝါးမြိုမိတာတွေရယ် ကြောင့် ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်… ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ အညော်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာအကြောင်းထက် အနာကျက် နှေးစေတဲ့ ကြောင်းကျိုးတရားအပိုင်းကိုပဲ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်…
ဒီ PAHs ဓာတ်ငွေ့ (အညော်) တွေကို ရှူသွင်းမိခြင်းအားဖြင့် ကျနော်တို့ရဲ့ DNA (Deoxyribonucleic acid) လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးဗီဇနှစ်ပင်လိမ်အမျှင်ကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်… ဘယ်လိုထိခိုက်စေသလဲဆိုရင် ‘Indicator Lesion’ 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine ဖြစ်စေတဲ့အပြင် ခရိုမိုဇုမ်း (Chromosomes) လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးဗီဇအစုကို ဖောက်ပြန်စေတာ(Chromosomal Aberrations)မို့ DNA ရဲ့ ဗီဇမျှင်တွေ ပြိုကွဲပျက်စီးစေတာဖြစ်ပါတယ်… အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာနဲ့ တချိန်ထဲမှာပဲ ဒီအညော်ငွေ့ကြောင့် တစ်သျှူးတွေရောင်ရမ်းပြီး ဒဏ်ရာနေရာမှာ သွင်ပြင်မျိုးစုံရှိတဲ့ သွေးဖြူဥတွေ [Polymorphonuclear leukocytes (neutrophilic granulocytes)] စုပုံရောက်ရှိလာစေပါတယ်… ဒါ့အပြင် Reactive Oxygen Species (ROS) လို့ခေါ်တဲ့ အောက်စီဂျင်ဓာတ်ပြုအစုအဝေးတွေကိုလည်း မကြာခဏ လွှတ်ထုတ်ပေးပြီး မျိုးဗီဇအစုကို ဖောက်ပြန်အောင် ပြုလုပ်ပေးပါတယ်… အဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်စေတာကြောင့် အနာကျက်နှေးတာအပြင် ကင်ဆာလိုရောဂါတွေ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်…
PAHs ဓာတ်ငွေ့နဲ့ ထိတွေ့မှုရှိနေတဲ့ အနာဆီကို သွေးဖြူဥတွေ ရောက်ရှိလာပြီဆိုရင် DNA-reactive PAH diol-epoxides လို့ခေါ်တဲ့ ဓာတ်အစုတွေကို ထပ်ထွက်လာစေတာကြောင့် မျိုးဗီဇအမျှင်ထိခိုက်မှုကို ပိုပြီး ဆိုးရွားစေပါတယ်… မျိုးဗီဇအမျှင်ကို ထိခိုက်မှုဖြစ်စေတဲ့အပြင် ခရိုမိုဇုမ်း မျိုးဗီဇအစုကိုပါ အထပ်ထပ်ဖောက်ပြန်မှုတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်… ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် အနာကျက်နှေးစေတဲ့အပြင် အရေပြားကင်ဆာကိုဖြစ်စေတဲ့ အဓိကဒြပ်ပေါင်းတွေ (Parent compounds in skin tumorigenesis) ကိုပါ ထွက်လာစေနိုင်ပါတယ်…
ကျနော်တို့တွေဟာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အချိန်တိုင်းလိုလို အညော်ဓာတ်ငွေ့မျိုးစုံ၊ PAHs ဓာတ်ငွေ့မျိုးစုံနဲ့ ထိတွေ့နေကြရပါတယ်… ဆေးလိပ်ငွေ့လိုအငွေ့ထဲမှာတောင် ဓာတုပစ္စည်း (Chemicals) ပေါင်း ၄၀၀ - ၆၀၀ အထိပါဝင်ပါတယ်… ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဓာတ်ငွေ့က ၁၄ ခုပဲရှိတယ်ဆိုပေမယ့် တခြားဓာတ်ငွေ့တွေက ကင်ဆာဖြစ်မယ့်ဓာတ်ငွေ့ကို ကူညီအားပေးတဲ့ ‘Co-carcinogenic effect’ အာနိသင်တွေရှိကြပါတယ်…
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင် အညော်ဟာ အနာကျက်တာကို နှောင့်နှေးစေတဲ့သတ္တိရှိတာကြောင့် ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ရင် အညော်ရှောင်ဖို့၊ ဆီကြော်တွေမစားဖို့ လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်... ဒါ့အပြင် အနာကျက်နှေးစေတဲ့အကြောင်းတွေထဲမှာ အညော်ကို ထပ်ပြီး ဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်… နောက်ပြီး စားဖိုမှူးတွေ၊ အိမ်ရှင်မတွေအနေနဲ့ အညော်ရဲ့ ဆိုးကျိုးကို သတိထားပြီး ချက်ပြုတ်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုပြီး သင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်… အညော်နဲ့ပတ်သက်ပြီး လေ့လာလိုသူတွေအနေနဲ့လည်း အညော်ဓာတ် တစ်ခုချင်းစီမှာပါဝင်တဲ့ PAHs ဓာတ်ငွေ့အမျိုးအစားတွေ၊ ရေတို/ရေရှည် အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ အညော်ကိုရှူသွင်းတာရဲ့ အနာကျက်စေမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု၊ အညော်ရဲ့ အနာပေါ် တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု စတဲ့အချက်တွေကို ထပ်ပြီး သုတေသနပြု လေ့လာမယ်ဆိုရင် ပိုပြီး အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အကြံပြုရင်း ‘အညော်၊ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ’ ဆောင်းပါးကို နိဂုံးကမ္ပတ်အဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေဗျ…
The Carcinogenic Effects of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Luch Andreas, p.420
Harmful fumes from frying – Chromatography Investigates, in News section of Chromatography Today, Sep 25 2015
Y. Zhiliang et al., 2015, Characteristics of PAHs from deep-frying and frying cooking fumes, Environmental Science and Pollution Research.
Frying and Cooking fumes by Joe Schwarcz, 20 Mar 2017
Why Are Vehicles’ Exhaust Fumes Harmful To Harmful? By Ashish, 2016 in Sicence ABC
Factors influencing wound healing by J.C. van der Meulen, 1979
Factors affecting wound healing by S. Guo and L.A. DiPietro, 2010
Local Anesthetics and Wound Healing by Prof: Milos Chvapil,6Dec 1979, vol.27, issue 6, in Journal of Surgical Research, p. 367 - 371
အနာကျက်နှေးစေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကို အနာတဝိုက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရား (Local) နဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံစနစ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရား (Systemic) ရယ်လို့ ခွဲခြားပြီး ပြောကြပါတယ်… ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ Local နဲ့ Systemic မခွဲဘဲ အကြောင်းတရားတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ရေးသား ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်…
၁။ အောက်စီဂျင်လုံလုံလောက်လောက်မရရှိခြင်း (Lack of oxygen or oxygenation)
အောက်စီဂျင်ဟာ ဆဲလ်တွေရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်(Metabolism)တွေ အတွက်အရေးကြီးပါတယ်… အထူးသဖြင့် ATP(Adenosine Triphosphate) ဆိုတဲ့ စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာပါ… အောက်စီဂျင်ဟာ ရောဂါပိုးတချို့ကို ကာကွယ်ပေးတယ်၊ သွေးကြောသစ်တွေ ဖြစ်ထွန်းဖို့ လုပ်ဆောင်ပေးတယ်၊ epithelium လို့ခေါ်တဲ့ သွေးကြောတွေ၊အင်္ဂါတွေရဲ့ အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာကို အသစ်ပြန်ဖြစ်စေတယ်၊ အနာကို ပြန်ဖာဖို့အတွက် ဖိုင်ဘာအမျှင်ဓာတ်ဖြစ်စေတဲ့ Fibroblast တွေပွားများဖို့ ကူညီပေးတယ်၊ Collagen Synthesis ကို ကောင်းစေတယ် စတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်… ဒါကြောင့် အောက်စီဂျင် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လုံလုံလောက်လောက်မရရင် အနာကျက် နှေးနိုင်ပါတယ်… သွေးထောက်ပံ့မှု အားကောင်းလေလေ၊ အောက်စီဂျင်များများ ရလေလေ အနာကျက်မြန်လေပါပဲ…
ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာက သွေးအားနည်းရောဂါ (Anaemia) မှာတော့ အနာကျက်နှေးတာ မဖြစ်ပါဘူး… ဘာလို့လဲဆိုရင် သွေးနီဥနည်းတယ်ဆိုပေမယ့် သွေးစေးပြစ်မှုလျော့နည်းတာ၊ သွေးကြောမွှားနေရာတွေမှာ ဖိအားကျတာ၊ နှလုံးကနေ သွေးပို့မှုများတာတွေကြောင့် အနာနေရာမှာတော့ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုက ပုံမှန်ဖြစ်နေလို့ပါပဲ…
၂။ တင်းအားများလွန်းခြင်း (Increased Wound Tension)
အနာကိုချုပ်တဲ့အခါ ချုပ်ကြိုးက အရမ်းတင်းလွန်းတာ (Tension) ကြောင့်လည်း သွေးကြောမွှားတွေမှာ သွေးထောက်ပံ့နိုင်မှုအားနည်းပြီး အနာကျက်နှေးတတ်ပါတယ်…
၃။ ဒဏ်ရာရသည့် နေရာ (Site of Wound)
အကွေးအဆန့်နေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့အနာဟာလည်း အနာကျက်နှေးနိုင်ပါတယ်… အထူးသဖြင့် မဖြစ်မနေလှုပ်ရှားနေရတဲ့ ခြေ၊ လက်၊ တံတောင်ဆစ်၊ ဒူးဆစ်တွေလိုနေရာမှာဖြစ်တဲ့ အနာတွေဟာ အကွေးအဆန့်၊ လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့နေရာမှာဖြစ်တဲ့ အနာတွေထက် အနာကျက်မြန်ပါတယ်…
၄။ ထုံဆေး (Local Anaesthesia)
ထုံဆေးထိုးတဲ့အခါ အာရုံကြောနဲ့ သွေးကြောမွှားတွေ ကျုံ့ပြီး Collagen စုစည်းမှုကို ဟန့်တားသလိုဖြစ်တာကြောင့်လည်း အနာကျက်နှေးပါတယ်…
၅။ အပူချိန် (Tenperature)
ပတ်ဝန်းကျင် အအေးဓာတ်လွန်ကဲတာ (၁၂ - ၂၀ ဒီဂရီဆဲလ်ဆီးယပ်စ် 12ံ- 20ံC) ကြောင့် အာရုံကြောတွေထုံ၊ သွေးကြောတွေကျုံ့တာကြောင့် အနာကျက်နှေးနိုင်ပါတယ်…ဒါကြောင့် ဆောင်းရာသီမှာ ဖြစ်တဲ့ အနာဟာ နွေနဲ့မိုးမှာဖြစ်တဲ့အနာထက် အနာကျက်တာ ပိုနှေးပါတယ်…
၆။ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း (Infections)
အနာကို ရောဂါပိုးဝင်တာကြောင့်လည်း အနာကျက်နှေးစေပါတယ်…
၇။ ပြင်ပ ပစ္စည်း (Foreign Body)
နိုင်ငံခြားကခန္ဓာကိုယ်ရှိတာ အဲလေ :p ကိုယ့်ခန္ဓာရဲ့သွေးသားမဟုတ်တဲ့ ပြင်ပ ပစ္စည်းတစ်ခုခုရှိနေတာ (Foreign Body)ဆိုရင်လည်း အနာကျက်နှေးပါတယ်…
၈။ ပျက်စီးတစ်သျှူးများ (Dead Tissues)
အနာထဲမှာ သွေးပုပ်ပြည်ပုပ်နဲ့ ပျက်စီးပုပ်ဆွေးနေတဲ့ တစ်သျှူးတွေရှိတာကို မဖယ်ရှားရင်လည်း အနာကျက်နှေးပါတယ်…
၉။ ဓာတ်ရောင်ခြည်သင့်ခြင်း (Radiation)
ဓာတ်ရောင်ခြည် (Radiation)ပေးရင်လည်း ပုံမမှန်တဲ့ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တာ၊ Endothelial cells, fibroblasts နဲ့ Epithelial cells တွေချို့တဲ့သွားတာကြောင့် အနာကျက်နှေးပါတယ်…
၁၀။ ရောဂါများ (Diseases)
နာတာရှည် ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါမှာလည်း အာရုံကြောတွေ ထုံကျဉ်ပျက်စီးတာကြောင့် အနာတွေဖြစ်လွယ်ပြီး အနာဖြစ်ရင်လည်းပျောက်တဲ့အချိန် ကြာပါတယ်… သွေးတိုးရောဂါမှာလည်း အနာကျက်နှေးနိုင်ပါတယ်…
သွေးခဲပစ္စည်းပုံမမှန်တဲ့ရောဂါတစ်ခုခုရှိတာ၊ သွေးကျဲဆေး (Aspirin) သောက်နေတာ (Coagulation disorders)ဆိုရင်လည်း သွေးခဲမှုဖြစ်စဉ်ကို အဟန့်အတားဖြစ်တာမို့ အနာကျက်နှေးပါတယ်…
ကိုယ်ခံအားလျော့နည်းနေတဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာ၊ ကင်ဆာဆေးသွင်းထားတဲ့လူနာ၊ ဓာတ်ကင်ထားတဲ့လူနာ၊ AIDS ရောဂါသည်တွေမှာလည်း အနာကျက်နှေးပါတယ်…
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ (Coronary Heart Disease)၊ လေဖြန်း၊လေဖြတ်ရောဂါ နဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်အားနည်းတဲ့ ရောဂါတွေမှာလည်း အနာကျက်နှေးနိုင်ပါတယ်…
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေရှိနေရင်လည်း အနာကျက်နှေးနိုင်ပါတယ်…
ကီးလွိုက်အနာရွတ်နေရာ (Keloids)၊ ဖိုက်ဘာမျှင်တွေစုပုံနေတဲ့နေရာ (fibrosis)၊ အနာကျက်နှေးစေတဲ့ပြဿနာရှိတဲ့မျိုးဗီဇ (hereditary healing disorders)၊ အသားဝါတာ (jaundice)၊ ဆီးထဲမှာရှိတဲ့ ယူရီးယားဓာတ် (Urea) က သွေးထဲရောက်နေတဲ့အခြေအနေ (uremia) တွေမှာလည်း အနာကျက်နှေးနိုင်ပါတယ်…
၁၁။ အာဟာရ (Nutrition)
အာဟာရပြည့်အောင် မစားမသောက်သူတွေမှာလည်း အနာကျက်နှေးနိုင်ပါတယ်… အနာကျက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေ၊ ပရိုတင်းဓာတ်တွေချို့တဲ့နေတဲ့အတွက် အနာကျက်နှေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်…
ပရိုတင်းဓာတ် (အသားဓာတ်) နည်းရင်လည်း အနာကျက်နှေးပါတယ်… Collagen Synthesis ကို နှောင့်နှေးစေလို့ဖြစ်ပါတယ်…
ဗီတာမင် အေ (Vitamin A) က granulocytes နဲ့ macrophages တွေကို အနာဆီရောက်အောင် ကောင်းကောင်းဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်… ဒါကြောင့် ဗီတာမင်အေ ချို့တဲ့ရင် အနာကျက်နှေးပြီး ဗီတာမင် အေ ပြည့်ဝရင် အနာကျက်မြန်ပါတယ်… စတီးရွိုက်ဆေးကြောင့် အနာကျက်နှေးတာကို ဗီတာမင်အေ ဆေးပေးပြီး ထိန်းနိုင်ပါတယ်…
ဗီတာမင် စီ (Vitamin C) လျော့နည်းတဲ့အခြေအနေတွေမှာလည်း အနာကျက်နှေးပါတယ်… ဒါကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရင် ဗီတာမင် စီက မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်… ဗီတာမင် စီက Collagen Synthesis ကို မြန်မြန်ဖြစ်စေတဲ့အတွက် သူမရှိရင် အနာကျက်နှေးမှာပါပဲ…
ဗီတာမင် အီး (Vitamin E) ရဲ့ အာနိသင်ကတော့ စတီးရွိုက်လိုမျိုး Granulocytes နဲ့ Macrophages ဆဲလ်တွေရဲ့ Lysosome အကာမြှေးကို တည်မြဲစေတဲ့အတွက် အဲ့ဒီဆဲလ်တွေ အနာဆီရောက်ဖို့ နှောင့်နှေးစေတာကြောင့် အနာကျက်နှေးစေပါတယ်… ဒါကြောင့် အနာရှိရင် Vitamin E မပေးသင့်ပါဘူး…
သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ သွပ်ဓာတ် (Zinc) ဟာ မီးလောင်ဒဏ်ရာလို အနာကြီးကြီးမားမားဖြစ်ရင် အများကြီးလိုအပ်ပါတယ်… Fibroblasts နဲ့ Epithelium ဆဲလ်တွေပွားများဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ ဓာတ်မြန်ပစ္စည်း DNA-polymerase နဲ့ Reverse-transcriptase Enzymes တွေမှာ သွပ်ဓာတ်ကို လိုအပ်ပါတယ်… ဒါကြောင့် သွပ်ဓာတ်နည်းရင် အနာကျက်နှေးစေပြီး သွပ်ဓာတ် (Zinc) ကို အစားပြန့်ဖြည့်ပေးရင်တော့ အနာကျက်မြန်ပါတယ်…
၁၂။ ဆေးဝါးများ (Drugs)
Corticosteroids လို့ခေါ်တဲ့ စတီးရွိုက်အရောင်ကျဟော်မုန်းဆေးတွေကြောင့်လည်း အနာကျက်နှေးပါတယ်… ဒီဆေးက endothelial cells, fibroblasts, epithelial cells တွေ အသစ်ပြန်ဖြစ်တာကို နှောင့်နှေးစေတဲ့အပြင် Collagen နဲ့ Proteoglycans တွေစုစည်းမှုကို ပါ နှေးစေတဲ့အတွက် အနာကျက်နှေးတာ ဖြစ်ပါတယ်… အနာရှိလျက်နဲ့ ဒီဆေးကို မဖြစ်မနေသုံးရတဲ့ အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ ဗီတာမင် အေ (Vitamin A) ကို ပေးမှ အနာကျက်မြန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်…
စတီးရွိုက်မဟုတ်တဲ့အရောင်ကျဆေး (NSAIDs) တွေဖြစ်တဲ့ Aspirin, Indomethacin တွေဟာလည်း သွေးကြောတွေကိုကျယ်စေတဲ့ prostaglandin E1, E2 တွေမထွက်အောင် ဖိနှိပ်တားဆီးပေးတာကြောင့် အနာကျက်နှေးစေနိုင်ပါတယ်…
၁၃။ အရက်သောက်ခြင်း (Alcohol) နှင့် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း
အရက်သမားတွေနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူတွေမှာလည်း အနာကျက်နှေးပါတယ်… အရက်သောက်တဲ့သူတွေမှာ ကိုယ်ခံအားကျသွားနိုင်တာမို့ ရောဂါပိုးဝင်လွယ်စေတဲ့အပြင် ဒဏ်ရာတဝိုက်မှာ သွေးကြောအသစ်တွေဖြစ်တာကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်… ဒဏ်ရာရတဲ့အခါ အစောပိုင်းရောင်ရမ်းမှုဖြစ်စဉ် (Early Inflammatory Response)ကို နှောင့်ယှက်ပေးသလို Collagen ထုတ်လုပ်စုစည်းမှုကိုလည်း ကျဆင်းစေတဲ့အတွက် အရက်ကို ရေရှည်စွဲစွဲမြဲမြဲသောက်သုံးသူတွေမှာ အနာကျက်နှေးစေပါတယ်…
ဆေးလိပ်မှာပါတဲ့ နီကိုတင်းဓာတ်ဟာ အစာစားချင်စိတ်ကို ဖိနှိပ်တဲ့အတွက် ဆေးလိပ်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲ သောက်သူတွေဟာ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာ စားသောက်တာနည်းသွားပါတယ်… ဒါကြောင့် အနာကျက်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ ချို့တဲ့နိုင်တာကြောင့် အနာကျက်နှေးနိုင်ပါတယ်…
၁၄။ စိတ်ဖိစီးမှု (Stress)
စိတ်ဖိစီးမှုများရင် Glucocorticoids (GCs) လို စတီးရွိုက်ဟော်မုန်းဓာတ်တွေကို ပိုပြီးထွက်လာစေပြီး ဒဏ်ရာနေရာမှာ ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်လာမယ့် Proinflammatory cytokines တွေနည်းပါးအောင် လျှော့ချပေးပါတယ်… ဒါ့အပြင် အနာကျက်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ IL-1α နဲ့ IL-8 တွေကိုပါ လျှော့ချပစ်ပါတယ်… ကိုယ်ခံအားဆဲလ်တွေ ကိုလည်း GCs က ဖိနှိပ်လိုက်တဲ့အတွက် ရောဂါပိုးတွေဝင်လွယ်ပြီး အနာကျက်နှေးစေနိုင်ပါတယ်…
၁၅။ အသက်အရွယ် (Age)
အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေ (အသက် ၆၀ ကျော်) မှာလည်း အနာကျက်နှေးပါတယ်… ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ တုံပြန်နိုင်စွမ်းတွေ၊ ဆဲလ်အသစ်မွေးဖွားနိုင်စွမ်းတွေ လျော့ကသွားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်… အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေမှာ အီစ်ထရိုဂျင်ဟော်မုန်းပေးရင်တော့ အနာကျက်မြန်တယ်လို့ သိရပါတယ်…
၁၆။ ကျား၊ မ ဟော်မုန်းဓာတ် (Sex Hormone)
မ ဟော်မုန်း ဖြစ်တဲ့ အီစ်ထရိုဂျင် (Oestrogen) ဟာ ပျက်စီးဆဲလ်တွေကို အသစ်ပြန်လည်မွေးဖွားပေးတာ၊ အရေပြားရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို အားပေးတာ၊ ပရိုတင်းဓာတ်တွေကို ဖြိုခွဲပေးတဲ့ ဓာတ်မြန်အင်ဇိုင်း Protease ကို တားမြစ်ပေးတာတွေနဲ့ ဆက်နွယ်တဲ့ မျိုးဗီဇနုတ် (Genes) တွေ ကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်… ဒါကြောင့် အီစ်ထရိုဂျင် ဟော်မုန်းဓတာ် နည်းရင်လည်း အနာကျက် နှေးစေပါတယ်… အသက်ကြီးတဲ့ ယောကျာ်း၊ မိန်းမတွေမှာတောင်မှ အီစ်ထရိုဂျင်ဟော်မုန်းရှိရင် အနာကျက်မြန်စေပါတယ်…
ကျားဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ အန်ဒရိုဂျင် (Androgen) ကတော့ အီစ်ထရိုဂျင်ဟော်မုန်းရဲ့ အရေပြားအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုနဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်…
၁၇။ အဝလွန်ခြင်း (Obesity)
အဝလွန်တဲ့သူတွေမှာလည်း ရောဂါမျိုးစုံတွယ်ကပ်နိုင်တဲ့အပြင် ဒဏ်ရာရရင်လည်း အနာကျက်တာ နှေးနိုင်ပါတယ်… ဒဏ်ရာရဲ့ နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ ရောဂါပိုးဝင်တာ၊ အနာပြန်ကွဲထွက်တာ၊ သွေးခဲဖြစ်တာ၊ ပြည်တည်နာတွေဖြစ်တာတွေလည်း ပိုဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် အနာကျက်နှေးနိုင်ပါတယ်…
၁၈။ အညော်၊ မီးခိုးနံ့ (Fumes)
အညော်မိရင်လည်း အနာကျက်နှေးနိုင်ပါတယ်… အညော်မှာပါဝင်တဲ့ PAHs (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) ဓာတ်ငွေ့တွေကြောင့် မျိုးဗီဇအစု ဖောက်ပြန်မှု(Chromosomal Aberration) ဖြစ်ပြီး DNA မျိုးဗီဇမျှင်တွေ ပြိုကွဲပျက်စီးသွားတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်… အသေးစိတ်ကို ကျနော်ရေးထားတဲ့ ‘အညော်’ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်…
နောက်ဆက်တွဲ (ခ) အနေနဲ့ ဒဏ်ရာအနာတရဖြစ်ရင် ကျနော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာက ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေလုပ်တယ်၊ အနာကျက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာကို ဗဟုသုတရဖွယ် ရေးသားဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်… နောက်ဆက်တွဲ (ခ) ကိုလည်း စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုကြပါဦး…
Posted by Alex Aung at 4:56 AM